Inhloso yengqungquthela bekungukwabelana ngemiphumela emisha yocwaningo nokugqugquzela ubudlelwane phakathi kwezikhungo zemfundo ephakemenezimboni. Ibihanjelwe ngabantu abangama-400, okubalwa kubo onjiniyela, ososayensi, abacwaningi kanye nabezimboni emhlabeni jikelele.
U-Akinyelu wethule iphepha locwaningo lwakhe lwe-PhD ku “Design, Characterization and In-vitro Study of Folic Acid Conjugated Chitosan Functionalized Gold Nanoparticles for Targeted Delivery of 5-Fluorouracil in Breast Cancer.”
‘Ucwaningo lwami lwe-PhD lugxile ekuthuthukiseni izinhlelo zokwelapha eziletha ngqo okwelaphayo okungama- chemotherapeutics lapho kudingeka khona futhi luhlose nokuthuthukisa nciphisa imiphumela engemihle ehambisana nalolu hlobo lokwelashwa.
‘Ingqungquthela ayigcinanga nje ngokunginikeza ithuba lokwabelana ngemiphumela yocwaningo lwami, kodwa futhi inginikeze ithuba lokwakha ubudlelwane obuhle nabacwaningi esibona izinto nabo ngeso elilodwa ocwaningweni lwangomuso,’ kusho u-Akinyelu.
Wengeze ngokuthi ukuthakasele ukuklonyeliswa ngephepha elivelele , wabonga ukwesekwa kwakhe yizikhungo eziningi kanye nobebheka ucwaningo lwakhe, uSolwazi u-Moganavelli Singh.
‘Ngifisa ukubonga i-National Research Foundation, i-World Academy of Science, i-UKZN, uSolwazi Moganavelli Singh, kanye namalungu e-Nano-Gene and Drug Delivery Research Group ngosizo lwabo ekufinyeleleni la engikhona,’ kusho uMnu Akinyelu.
Amagama: wu-Zolile Duma
Isithombe: wu-Jude Akinyelu